Modúfuk ór kaháni (The bees) – Rohingya Language Foundation
MODÚFUK OR KAHÁNI
Modúfuk ókkol bahá bañdí yóre táke. Bahá uggwát mazé modúfuk or rani uggwá táke. Ar oinno ham ola fuk arde modda fuk ókkol ó táke. Zibá rani modúfuk asé íba beggún óttu áro dhoóñr. Ar íba yé oinno fuk beggún óre hókumot goré. Andha ókkol ó fare. Ham ola fuk asé dé éçe, miali fuk ókkol tiríc házar óttu salic házar foijjonto táke.
Ham ola fuk asé dé íin é bahá bañdí bólla ham goré. Fúl ókkol óttu faní ókkol nialai aní yóre zoma yó goré. Modda fuk ókkol ó cót aník asé. Ham ola fuk ókkol é fúl ór faní ókkol aní yóre bahát mazé zoma goré.
É fúl ór faní íin modúfuk or bahár bútore modú boni zagói. Modú bicí miçá, modú háile cókti ó, ar dabait ó góle. Modúfuk óre gór bañdí di cúndor gorí fali lé yó modú ókkol nialai fare.
By: CITIZEN OF ARAKAN
Modú = ပျားရည်
Kaháni = အကြောင်း
Bahá = သိုက်/အုံ
Rani = ဘုရင်မ
Hamola = လုပ်သား
Modda = အထီး
Beggún = အားလုံး
Dhoóñr = အကြီး
Hókumot = အုပ်ချုပ်သည်
Andha = ဥ
Miali = အမ
Tiríc házar = သုံးသောင်း
Salic házar = လေးသောင်း
Fúl = ပန်း
Cót = ရာ
Zoma = စုဆောင်း
Miçá = ချိုသည်
Cókti = အဟာရ
Dabait ó góle = ဆေးဖက်ဝင်သည်
Gór = အိမ်
Cúndor gorí = စနစ်တကျ
Lekóya: Citizen of Arakan (Bormá, Akyab, Nazir Fara)
Father Of Rohingyalish. Eng. Mohammed Siddique (UK)
ပျားတို့သည် အုံဖွဲ့၍ နေတတ်ကြသည်။ ပျားအုံ တစ်အုံတွင် ပျားဘုရင်မ တစ်ကောင်သာ ရှိသည်။ ထို့ပြင် လုပ်သားပျားများနှင့် ပျားထီးများလည်းရှိကြသည်။ ပျားဘုရင်မသည် ပျားတို့တွင် အကောင်းအကြီးဆုံးဖြစ်၍ ပျားတို့ကို အုပ်ချုပ်သည်။ ဥများကိုလည်း ဥရသည်။ လုပ်သားပျားများမှာ ပျားမများဖြစ်၍ သုံးသောင်းမှ လေးသောင်းအထိရှိသည်။
လုပ်သားပျားများသည် ပျားအုံအတွက် အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ပန်းပွင့်များမှ ဝတ်ရည်များကို စုပ်ယူစုဆောင်းကြသည်။ ပျားထီးမှာ အကောင်တစ်ရာခန့် ရှိတတ်သည်။
လုပ်သားပျားတို့သည် ပန်းဝတ်ရည်တို့ကို လှည့်လည် စုပ်ယူကာ ပျားအုံသို့ သယ်ယူလာကြသည်။ ထိုပန်းဝတ်ရည်တို့သည် ပျားအုံတွင်း၌ ပျားရည်များဖြစ်လာသည်။
ပျားရည်သည် အရသာချို၍ အာဟာရဓာတ်လည်း ကြွယ်ဝ၏။ ဆေးဖက်လည်းဝင်သည်။ ပျားများကို ပျားအိမ်များဖြင့် စနစ်တကျမွေးမြူ ကာ ပျားရည် ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။